၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ (အပိုင်း-၂)
၉. ကာဒီနယ် မောင်ဘို
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များ (အပိုင်း-၁)
၁. ဦးသန်းရွှေ - အငြိမ်းစား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး
အိန္ဒိယကမ်းခြေစောင့်သင်္ဘော ရန်ကုန်သို့ လာမည်
ဦးခင်အောင်မြင့်က Eleven Media Group ကို မတောင်းပန်နိုင်
နေပြည်တော်၊ ဇန်နဝါရီ ၅ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာသံတော်ဆင့် ဂျာနယ်ပါ အင်တာဗျူးနှင့် ပတ်သက်ပြီး Eleven Media Group ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်က အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်အား တစ်ပတ်အတွင်း ပြန်လည်ရှင်းလင်းတောင်းပန်ရန် ကြေညာထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တောင်းပန်မည်မဟုတ်ဟု ဦးခင်အောင်မြင့်က ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်.
အိန္ဒိယလေယာဉ် ရန်ကုန်သို့ အရေးပေါ်ဆင်းသက်
နိုင်ငံတော်က အကြွေး ကျပ်သန်း ၅,၃၂၄ ခန့် ရရန် ကျန်နေ
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၅
ရောင်းချပြီးဖြစ်သည့် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် နိုင်ငံတော်က ကျပ်သန်း ၅,၃၂၃ ဒဿမ ၃၄၁ ရရှိရန် ကျန်ရှိနေသေးသည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ငွေစာရင်း ကော်မတီက အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ ယနေ့ တင်ပြခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးနေရာ တောင်းသူများကို အရေးယူမည်
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဖွဲ့စည်းမည့် အစိုးရအဖွဲ့သစ်တွင် ဝန်ကြီးနေရာပေးရန် စာရေးသား တောင်းဆိုမှုများ ရှိနေပြီး ထိုကဲ့သို့ တောင်းဆိုသည့် ပါတီဝင်များကို ပါတီစည်းကမ်းအတိုင်း အရေးယူသွားမည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားသည်။
တရုတ်တွေ ကြီးစိုးလာတဲ့ မူဆယ်
တက်ရောက်သူ ၈၀၀ ကျော်မည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (အင်န်စီအေ) ၏ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံအား ဇန်နဝါရီ ၁၃ မှ ၁၆ ရက်အထိ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သည်။